गुल्मी अस्पताल लुम्विनी प्रदेशका उत्कृष्ट अस्पतालहरु मध्य दोस्रोमा - Gulminews
गुल्मी अस्पताल लुम्विनी प्रदेशका उत्कृष्ट अस्पतालहरु मध्य दोस्रोमा
२०७७ मंसिर १, ००:३१
बुटवल, ३० कात्तिक । यसबर्ष गुल्मी अस्पताल लुम्बिनी प्रदेशको उत्कृष्ट अस्पतालहरुको सूचीमा दोस्रो स्थानमा परेको छ । बर्दिया अस्पताल सुचिमाको पहिलो स्थानमा छ भने रोल्पा अस्पताल तेस्रो ठहरिएको छ ।
गत २५ कात्तिकदेखि २७ कात्तिक सम्म चलेको स्वास्थ्यको प्रदेशस्तरीय बार्षिक समिक्षा गोष्ठीमा उत्कृष्ठ ठहरिएका ती अस्पतालहरुलाई सम्मान समेत गरिएको थियो । प्रतिस्पर्धामा लुम्विनी प्रदेशका १२ वटा जिल्लाका १३ वटा अस्पताल समावेश थिए ।
खासगरी न्युनतम सेवा मापदण्ड (एमएसएस) लागू भएको छ कि छैन ? कोभिड १९ को महामारीमा कसरी सेवा दिईयो ? बजेटको उपयोग कसरी गरियो ? बेरुजुको अवस्था कस्तो छ ? लगायतका विषय गरिएको मूल्यांकनबाट अस्पतालहरुलाई उत्कृष्ठ छनौट गरिएको हो ।
उत्कृष्ठ ठहरिएका अस्पतालका प्रमुखहरुलाई लुम्बिनीका सामाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन बरालले सम्मान गरेका थिए । बर्दिया अस्पतालका प्रमुख मेडिकल सुपरीटेन्डेन्ट डा. सुवाश पाण्डे, यस्तै गुल्मी अस्पतालका प्रमुख डा. उत्तम पच्या र रोल्पा अस्पतालका प्रमुख डा. धनमाया घर्तीलाई मन्त्री बरालले सम्मान गरेका थिए ।